अब १५ मिनेटमा आफ्नो अनुहारको चमक बढाउन अपनाउनुहोस यी ५ सहज तरिका !!::SamajikPatra
सफा, दागरहित तथा चम्किलो अनुहार कसलाई मन पर्दैन होला ? तर, आजको व्यस्तताले भरिएको जिन्दगीमा हामी आफ्नो छालामा पर्याप्त ध्यान दिन पाउ“दैनौं । जसका कारण छाला मृत तथा रुखो देखिन थाल्छ ।
तनाव, प्रदूषण तथा तनावको सोझो प्रभाव हाम्रा छालामा नै देख्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो छालाको चमकलाई बचाउन धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।